”Qaraxu ma sii soconayaa haddii aan la helin Wasiir Amni oo la isku raacsan yahay?!!” – Dad ka falceliyey qoraalka Cali Yare | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Qaraxu ma sii soconayaa haddii aan la helin Wasiir Amni oo la...
”Qaraxu ma sii soconayaa haddii aan la helin Wasiir Amni oo la isku raacsan yahay?!!” – Dad ka falceliyey qoraalka Cali Yare
(Muqdisho) 25 Sebt 2021 – Cali Yare oo ku magacaabay Guddoon Xigeenka Gobolka Banaadir gaar ahaan dhanka Amaanka oo ka mid ah dadka aad ugu dhow Madaxtooyada ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook waxaa ka dhashay doodo iyo su’aalo cusub.
Cali ayaa qoraalkiisa ku bilaabay: ”Saakay 10:47 Gaari Toyota Serf ah uu wadi naftii-Halige ayaa isku qarxiyay bar-ciidan oo ku taala isgoyska Ceelgaab gaar ahaan goobta hubinta Amniga oo ah meel ay saf ka galaan gaadiidka si loo hubiyo. Ilaa hadda qasaaruhu waa geerida (7). Dhaawaca 14 iyo gubashada 4 gaadiidkii waddada isticmaalayay ah.
Cali ayaa deeto sameeyey far fiiq iyo soo jeedin isla socda, taasoo fasiraad wayn bixin karta marka la eego nidaamka loo yaqaan Hegelian Dialectic ee arrin loo sameeyo si loo gaaro natiijo la raadinayey.
”Labo (2) Sano ka hor ayaa u danbeysay in 3 maalmood oo isku xigta oo uu qarax ka dhaco Muqdisho, waxaan codsaneynaa inaan Amniga Gobolka Banaadir la ganacsiyeeyn lana siyaasadeeyn, oo waxkasta laga hormariyo badqabka dadka iyo hantidooda.
”Madaxweynaha iyo Ra’salwasaarihiisa waxaan ka codsaneynaa in ay si degdeg ah u soo magacaabaan Wasiir Amni oo ay isku waafaqsanyihiin ahna qof bulshada ka gadmi kara, lana shaqeyn kara dadka iyo Amniga qeybihiisa kala duwan.” ayuu raaciyey.
Markaas ayay dadku bilaabeen inay Cali Yare waydiiyaan su’aalo tuhun xambaarsan oo lagala dhex baxay hadalkiisa.
”Warkaan waxaan u fasiran karaa hadaan wasiir amni oo la isku waafaqsan yahay aan lasoo magacaabin qaraxa waan sii wadeenaa macnahaagu waa intaas iyo nuxurka hadalkaaga.” ayuu soo qoray nin la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed.
”Hadii wasiir amni la helo qaraxa ma istaagaa mudane.” ayuu waydiiyey qof kale.
”Qofkasto indheer garad ah, aqriyo bostigaaga waxuu KA dhadhami karaa qoraalkaaga Inuu ahaay qaraxii maanta mid siyaasadeed balse waxaa ogaata Caliyow dadka meesha ku dhamaanaayo waa dadkaagii waa ahalkaagii waa dhiigaagii Rabitaan shaqsi yuusan kaala waynaan dhiigaas maatada ee qubanaayo. Rabi hortiisa Maxaa su’aalo qarsoon yaalla?” ayuu soo qoray Qoorsuul.
Dadka ayaa dhanka kale inta badan Cali Yare ku dhaliilayey inuu sidoo kale xilligan siyaasad kaba hadlo iyadoo ay dhinteen dad badan oo rayid ihi.
Previous articleDEG DEG: Gabar ka tirsanayd howlwadeennada Xafiiska RW Rooble oo ku dhimatay qaraxii Ceel Gaabta (Maxay ku qaybsanayd?)
Next articleTOOS u daawo: Chelsea vs Man City, Man United vs Aston Villa – LIVE (Shaxda Sugan)